Ke कुञ्जीहरू प्रासंगिक, जानबूझकर अभियानहरू
Tomás Quiñonez मा डिसेम्बर 9, 2020 द्वारा लिखित।
"त्यहाँ ल्याटिनो भोट छ?"
२०२० को राष्ट्रपति पदको अभियानको परिप्रेक्षमा, यो प्रश्न पंडित, चुनावदाता र राजनीतिज्ञहरूले टर्नआउटको नतीजा बुझ्न गाह्रो पारेको प्रश्न हो। यो वर्ष ल्याटिनो मतदाताहरूको लागि जलबिन्दुको क्षण थियो, करीव मोडीरहेको २०१ twice को तुलनामा दुई पटक दर प्रारम्भिक मतदानमा। ल्याटिनो मतदाताहरूको असाधारण वृद्धिले सत्यलाई जोड दिन्छ कि लाइटिनोको मतबिना ह्वाइट हाउसको लागि कुनै मार्ग छैन। त्यसोभए यो वास्तवमै अवस्थित छ?
उत्तर, छक्कलाग्दो छैन, दुवै हो र होईन। केहि साझा अनुभवहरू निश्चित रूपमा ल्याटिनो समुदायलाई एक विशाल सांस्कृतिक विमानमा सँगै ल्याउँदछ। यद्यपि अनुभव र पृष्ठभूमिहरूको विस्तृत श्रृंखलाले एकाधिकार ल्याटिनो परिचयको कुनै पनि धारणा तोड्न सक्दैन, किनकि कुनै एकल मुद्दा वा राजनीतिक सम्बद्धताले सबै ल्याटिनो मतदाताहरूलाई एकताबद्ध गर्दैन। विविधता भित्र यो विविधता भनेको कुनै पनि पार्टी वा नीति को ल्याटिनो समर्थन को लागी लिन सकिदैन। यसको लागि समय र संसाधनहरूमा निरन्तर लगानी आवश्यक पर्दछ र चुनावको बीचमा दिगो, कडा सम्बन्धहरू निर्माण गर्न। राजनीति व्यक्तिगत हो र लातिनो मतदाताहरुलाई परिचालन गर्ने चाबी सन्देश हो जुन उनीहरूको जीवनका अनुभवहरूमा बोल्दछ।
यो मार्गनिर्देशक मतदाताहरूलाई भेट्न उनीहरू कहाँ छन् भन्ने भेटमा एमएएफको दोस्रो प्रकृति हो। वास्तवमा, एक समुदाय-रूपरेखा भित्र ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण यो छ कि हामीले गत १ 14 बर्षमा सबै उत्पादनहरू र सेवाहरू कसरी बनायौं। हामीले हालसालै यही परिश्रमलाई हाम्रो परिचालन अभियानमा लागू गरेका छौं र हालसालै हाम्रो GOTV अभियानमा १० 105,००० ग्राहकहरूको लागि यस दृष्टिकोणको निर्माण गर्दैछौं। यहाँ हामीले के सिक्यौं विविध मतदाताहरूको लागि सफल अभियान चलाउन keys कुञ्जीहरू हुन्:
१. सबै आवाजलाई सम्बन्धित संस्कृतिको लागि आवश्यक छ
मुख्यधाराका राजनीतिक अभियानहरूले केवल मतदाताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् जसमा बढी भोट हुने सम्भावना छ। तिनीहरूले भोट नचाहनेलाई बेवास्ता गर्छन्। तिनीहरूले पूर्ण रूपमा मतदान गर्न अयोग्यलाई बेवास्ता गर्छन्। मतदान गर्न अयोग्यहरूलाई बेवास्ता गर्नु गल्ती र हराएको अवसर दुबै हो।
के, यसको सट्टामा, हामी सत्य हुन जान्दछौं कि प्रत्येक आवाज गणना गरिन्छ। यो भर्खरको निर्वाचनले धेरै राज्यहरु जित्ने, हराएको वा अविश्वसनीय रूपमा सानो मार्जिनको आधारमा पुन: गणनाका लागि पठाइएको देखायो। जबकि त्यहाँ एक अभिलेख मतदाता मतदान, सहभागिता अझै पनी हुन सक्छ र बढी भएको हुन सक्छ। हामी विश्वास गर्छौं कि सबै व्यक्तिहरू, उनीहरूको आप्रवासी स्थितिलाई ध्यान दिएर, हाम्रो भविष्यलाई आकार दिने अभियानहरूमा संलग्न हुनुपर्छ किनकि तिनीहरूको आवाजले व्यक्तिगत चुनावको मात्रालाई मात्र स can्केत दिन सक्छ, तर यसले स engage्लग्नताको व्यापक संस्कृति सिर्जना गर्दछ। र यो सगाईको संस्कृति हो जुन हाम्रो राष्ट्रको आत्मालाई रक्षा गर्नको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ किनकि हामी अझ बढी समान भविष्यको लागि निर्माण गर्दछौं।
२ विभाजन गर्न नम्रता चाहिन्छ
२०१ 2016 पछि, DNC ले उनीहरूको मतदाता फाईलहरू विभाजित गर्नुको महत्त्व महसुस गर्‍यो अधिक लक्षित, सान्दर्भिक सन्देश "उप-जातीय मतदाता।"यस तरिकाले तिनीहरू फराकिलो ल्याटिनो छाता मुनि पियर गर्न सक्षम भए र डोमिनिकनोस, मेक्सिकोस, तेजानोस र क्युबानोसलाई अधिक सान्दर्भिक सन्देश पठाउँदै। जबकि यो सहि दिशामा एक कदम हो, यसले अझै पनि आफ्नो परिवारको राष्ट्रियताका आधारमा मतदाताहरूको बसोबास गर्ने अनुभवहरूको बारेमा धेरै नै लिन्छ।
व्यक्तिहरूको विभाजन प्रक्रियामा एजेन्सी पनि हुनुपर्छ उनीहरूको जीवनको अनुभवहरूको आधारमा स्व-चयन गरेर। हाम्रो GOTV अभियानमा, हामीले प्रारम्भिक सर्वेक्षण पठायौं जसले ग्राहकहरूलाई त्यसो गर्न अनुमति दिन्थ्यो। तिनीहरूको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरिसकेपछि, हामी प्रत्येक दर्शक खण्डसँग अनुगमन गर्न सक्षम भयौं जुन उनीहरूले गहिरो स्तरमा कुरा गर्नका लागि छनौट गरे।
Values. मानको आधारमा प्रत्येक खण्ड समूहको लागि सन्देश सिर्जना गर्नुहोस्
दर्शक विभाजन भन्दा पनि अगाडि, विचारशील, श्रोता समूहहरूलाई सान्दर्भिक सन्देश आवश्यक छ। हामीले पत्ता लगायौं कि सांस्कृतिक रूपमा सान्दर्भिक, समावेशीकरण, सम्बद्ध, र समुदायको मूल्य वरिपरि भावनात्मक रूपमा संलग्न सन्देशहरू मानक, लेनदेनको बयानबाट भन्दा बढी प्रभावकारी थियो किनभने यसले हृदयलाई बोल्दछ।
Your. तपाईको मान्यता र सन्देश परीक्षण गर्नुहोस्
एक शिक्षा संगठन को रूप मा, हामी सँधै हाम्रो मान्यताको परिक्षण मा अनुशासित रहन्छौं। अभियानको सन्दर्भमा यो अनुशासनले ग्राहकहरूको नमूनाको साथ चलिरहेको प्रयोगलाई अनुवाद गर्दछ जुन प्रत्येक क्षेत्रको साथ कुन सन्देश सबैभन्दा बढी प्रतिध्वनि निर्धारण गर्दछ। जस्तो औंठाको एक नियम, हामी प्रत्येक दर्शक खण्डका लागि messages सन्देशहरू सिर्जना गर्ने छौं, र प्रत्येक सन्देशलाई २०० सम्पर्कहरूको साथ परीक्षण गर्दछौं। प्रत्येक अभियानको बखत सिक्ने यो इच्छुकताले अन्तर्दृष्टि उत्पन्न गर्‍यो जसले हामीलाई ग्राहकहरूको साथको सम्बन्ध विकास गर्न जारी राख्दै प्रत्येक अभियानको साथ हाम्रो सन्देश प्रवाहमा सुधार गर्न सक्षम गर्दछ।
Clients. ग्राहकहरू कहाँ छन् तिनीहरू पुग्नुहोस्
जब यो अन्ततः वास्तविक अभियान सुरू गर्ने समय हो, अन्तिम महत्त्वपूर्ण चरण बहु-च्यानल अभियान डिजाइन गर्ने जुन उनीहरू आफू बसेका मानिसहरूलाई भेट्छन्। जबकि यो अभियान को आयोजक को लागी एक लिफ्ट को लागी हुन सक्छ, यो आवश्यक छ कि यति राम्ररी तयार गरीएको सन्देशहरु अन्ततः अर्थपूर्ण र प्रभावकारी तरीकाले डेलिभर गरिनु पर्छ।
यस कारणका लागि, हामीले हाम्रो GOTV अभियान दुबै ईमेल र स्वचालित एसएमएस समावेश गर्न डिजाइन गरेका छौं किनकि हामीले पहिले सिकेका थियौं कि अंग्रेजी र स्पेनिश बोल्ने ग्राहकहरूको सञ्चार प्राथमिकताहरू फरक छन्। एसएमएस को लागी उद्योग मानक प्रतिक्रिया दरहरु एक प्रभावशाली 22% हो। हाम्रो GOTV अभियानको स्पेनिश भाषा बोल्ने ग्राहकहरूले number 44१TP1T को दरमा हाम्रो शिल्पित, लक्षित मेसेजिंगको जवाफ दिँदै त्यो संख्या दोब्बर बनायो।
यस अभियानको तत्काल सफलताहरूको बावजुद प्रायः छायामा छोडियो समुदायहरूमा आउटरीचको प्रभाव प्रदर्शन गर्न, हाम्रो प्रयासको ठूलो जीत यसको संलग्नताको व्यापक संस्कृतिमा योगदान थियो। यो रातरात हुन सक्दैन, वा लेनदेन गतिविधिहरू मार्फत, किनकि संस्कृति मात्र हुदैन। यो निर्माण गर्नुपर्दछ, हामी यसलाई निर्माण गर्नुपर्दछ, यो मनाउनुहोस्, र यसलाई फीड गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित संस्कृति एक निरन्तर चलिरहेको प्रक्रिया हो, इतिहासको नैतिक चापलाई न्यायको प्रति झुकाउँदै।
यी अन्तर्दृष्टिहरूले हाम्रो कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ जब हामी गतिशील रूपमा अगाडि बढ्न अधिक लगानी गर्छौं। र हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं हामीसँग यस यात्रामा सामेल हुनुहोस् सबैका लागि न्यायपूर्ण र न्यायपूर्ण संसारको लागि लड्न।